ကြီးမားတဲ့ပြဿနာခုရင်ဆိုင်နေရဂိမ်းကစားနှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအများကြီးကြီးတွေပလက်ဖောင်းမှခွင့်ပြုအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအပေါ်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ။ ဒါကတကယ်ကိုယူတာပဲဆိုရင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကြိုက်ဖို့ရှုပ်များချွတ်နေစဉ်၊ဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြောင်းငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပြုပြင်အပေါ်ဤနေရာတွင်လိင်ဂိမ်းများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်တော်တော်လှပတဦးလျှင်၊ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ပြောကိုယ်ကို:ပေးပြီးသည့်နေရာတွင်တစ်ဦးဧရိယာကလူတက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ရကြောင်းဂိမ်းများများမှာအထူးဒီဇိုင်းသူတို့ကိုကူညီ masturbate။, ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများဘယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကတည်းက၊ကျနော်တို့အဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့အဖြစ်ပေးစေဖို့လက်လှမ်းအပူဆုံးအရွယ်ရောက်လူမွလူအပေါင်းတို့သည်အရာ၏စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေဖို့ပည္ဆိုင္ရာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ မေ့လျော့၊သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းနှင့်အတူခွဲတန်းတူနေရာကိုပူဇော်သောအမှိုက်နှင့်စုတ်:အထူးသဖြင့်သူများရှိသည်သောလှပတဲ့ဂိမ်း! ယေရှုခေတ်အဟောင်းတယ္။ အမွတ္–ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိင်ဂိမ်းများအန္းသင်ပြသွားကြသည်သောချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကြီးမြတ်ညမ်းဂိမ်းကစားများအတွက်မိုဘိုင်းကိရိယာ၊ကျွန်တော်တို့တွေဟာယောက်ျားတွေအကြောင်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။, SGA ခဲ့သေဆုံးပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်ကျော်ကတည်းကခင်ဗျားဒီမှာ၊သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအယူအပိုခြေလှမ်းနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ရုံမည်မျှကြီးမြတ်စုဆောင်းမှုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်၊လိင်ဂိမ်းများကပေါ်မှာထိုင်တဲ့ဒေတာဘေ့စများပါဝင်ပါသည် ၂၈။ အဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ၊ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေစေသာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဝါးထိန်းချုပ်ရေးမိမိတို့အဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး။ ထိပ်၏အောက်ခြေအဤချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းရှာကျွန်းစုလွှတ်ပေးပြီအပေါ်လိင်ဂိမ်းများအန္းဘယ်နေရာမှာမဆို။ သေချာတာပေါ့၊လူအများကြားပြီးနှင့်အတူတောင်းဆိုချက်ကိုခွင့်ပြုမျှဝေဖို့သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှိသည်ချင်သောအဆင့်၏ထိန်းချုပ်မှုကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်ကျော်တစ်ဦးအစွန်းဒါခေါ်သည်။, ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်ပယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ကုဒ်များလွန်း–လူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းရုံတွေထက်ပိုကောင်းပျမ်းမျှတစျရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုညစ်ညမ်း။ ဤအကျိုးခံစားခွင့်၊အစားကြောင့်၊ဆိုလိုတာကကျနော်တို့ငွေကြေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြန့်ချိပြီးဆက်လက်ထုတ်ဝေဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းများအပူအောက်မှာကော်လာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ သင့်ရဲ့ကြက်အဆက်ဆက်သွားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ထိတွေ့ခံရဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောကြီးမြတ်ဂိမ်း–ကျနော်တို့စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ထုတ်ဝေလွန်းသူတို့ကို၊အထူးသဖြင့်လျှင်သင်ပြန်လာရှုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှချွတ် XXX ရွေးချယ်စရာရှိသည်။, လိင်ဂိမ်းများအန္းသည်အနောက်-အဆင့်ဝန်ဆောင်မှုသင်ချစ်ရန်သွားကြသည်၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြု။:သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးအခုအချိန်မှာမြင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့အမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်များအတွက်။
နောက်ထပ်ပြဿနာအတွက်ဂိမ်းကစားအာကာသအကြောင်းအများကြီးခေါင်းစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြနှင့်အတူပုံမှန်အလုပ္လုပ္ပါဖြစ်သူတို့အဓိကအာရုံစိုက်–မယ့်အရာတစ်ခုခုကျနော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်တိုက်ဖျက်ဖို့သေချာနေဖြင့်မည်သူမဆိုနှင့်အတူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အနိုင်အသုံးချမှဂိမ်းကျနော်တို့ကဒီမှာအတွင်းလိင်ဂိမ်းများ။ သဘာဝကြောင့်၊ကျွန်တော်ဖော်ပြရန်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအန္းအာရုံစိုက်တဲ့အရာကိုအမြောက်အကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်ကိုဝင်။, ကျနော်တို့ကခံစားသမ္မာကြောင်းရှင်းပြဖို့အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းကစားနိုင်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအဖြစ်ဖန်တီးသောသူသည်လူများအကောင့်နှင့်ဝင်ရောက်၊ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အ၊ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်ဒီနေရာမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုကနေတဆင့်အအန္း။ ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်တဲ့အနာဂတ်အားလုံးသည်ဂိမ်းများကစားနိုင်ပါတယ်အားလုံးထုတ်ကုန်များပေါ်မှာ၊ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာ–ဒါကမၻာကျနော်တို့အတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်! အလွန်အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာထွက်အဲဒီအန္းဂိမ်းကစားချင်သော XXX၊ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်အတွက်အထူးပြုဤအလွန်တိကျသောနည်းလမ်းနှင့်ဤသို့ဝေး၊ဒါဟာအလွန်အောင်မြင်သောဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်။, ကျနော်တို့ထူးခြားသောအမှုအရာဒီမှာခြုံငုံအရည်အသွေးကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယ။ သူရပ်တန့်သွားပြီးလည်း? လက်တွေ့ကျကျအဘယ်သူမျှမအကိုင်တစ်ခုဖယောင်းရန်နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့လိင်ဂိမ်းများအန္း!
ကျနော်ပြောပြီးပြီသင်အဓိကဒြပ်စင်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များလိင်ဂိမ်းများအန္း:အထူးသဖြင့်ကြောမိုဘိုင်းဂိမ်းကစား။ အခုတော့၊သော်လည်း၊ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအကြှနျုပျကိုရပ်တန့်ရန်အဘို့သစ်ပင်ငါ့အဖုံးနှင့်အစား၊သင်ဖိတ်ခေါ်တွင်းလိင်ဂိမ်းများအန္းနိုင်အောင်ကိုယ်အဘို့မြင်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ အများအပြားရှိပါတယ်အောင်မြင်ဖို့၊သော့ဖွင့်၊တစ်ဦးတက်ကြွဖက်ဆာဗာ၊အခမဲ့ပြိုင်ပွဲနှင့်များများပိုကုန်ရုံပြောသောနေတယ်ဆိုရင်အစားအတူအန္းဖုန်းချစ်သောသူလိင်နှင့်ညစ်ညမ်း၊ဤသည်တော်တော်အများကြီးပဲလိုအပ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာ။, ဒါကြောင့်၊တွေ့မြင်ချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်သွားမယ့်ဘာကိုရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂိမ်းဒေတာဘေ့စ? သင်သိသည်အဘယ်သို့ပြုမှ–သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်ယခုကြည့်ရှုမည်သို့လိင်ဂိမ်းများအန္းကနေကွဲပြားခြားနားသည်လူအပေါင်းတို့သည်အခြားအစက်အပြောက်ထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်! လာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်လမ်းတစ်လျှောက်:အခုသြားတဲ့လူရှုပ်များချွတ်ရန်အကောင်းဆုံးမင်း XXX ပတ်ပတ်လည်ဂိမ်း!